FANOHERANA NY HAT : VONONA HANATEVIN-DAHARANA NY ANKOLAFY TELO I MONJA ROINDEFO
Tranga tsy nisy niahiahy tamin’ny fotoana naha Praiministry ny Hat an’i Monja Roindefo. toa kisarisarina antso ihany sisa ilay nataon’ny ankolafy telo (Zafy- Ratsiraka – Ravalomanana) tetsy amin’ny kianjan’Alarobia lasa teo. Nilaza tsy nihambahamba ny amin’ny fahavononany hidinika ambony latabatra hiaraka amin’ny ankolafy telo mantsy iry Filoha nasionalin’ny Monima iry.
Ny famahana ny krizy eto Madagasikara no tohan-kevitra naroson’i Monja Roindefo fa nanosika azy hiara-dia amin’ny ankolafy telo. Nahitsiny avy hatrany kosa fa tsy midika fandehanana hikabary amin’ny hetsika famoriam-bahoaka karakarain’ny ankolafy telo anefa izany. « Fifampidinihana hitadiavana hevitra sy vahaolana maharitra hamoahana haingana ny firenentsika ao anatin’izao krizy izao no hataoko miaraka amin’izy ireo. Hatrizay mantsy dia toa nandeha ila ihany ny antso nataon’ny fianakaviambe irasiam-pirenena. Mila dinika vaovao hiarahan’ireo hery velona rehetra indray ny eto Madagasikara », hoy i Monja Roindefo tetsy amin’ny trano fonenany tetsy antsakaviro, omaly.
Tsy reniranon’ikopa !
Tsy mandà ny fiarahana amin’i Monja Roindefo ny avy ao amin’ny ankolafy Ravalomanana. « Tsy izahay mihitsy no hanosi-boho-tanana izay mihevitra ny hamaha ny olana ara-politika eto amintsika. Rehefa misy ny fahavononany hiara-hiasa dia tsy mametraka olana izahay ; Na mety tsy mitovy loatra aza ny soson-kevitra haroson’ny tsirairay dia azo atao foana ny mifampidinika », hoy i Mamy Rakotoarivelo, mpitarika ny delegasiona avy amin’ny ankolafy Ravalomanana.
Somary nametraka fepetra kosa, mialoha ny fiaraha-miasa, ny avy amin’ny ankolafy Zafy Albert. « Raha ny fahafantarako azy dia efa nisy ihany ny fihaonan’i Monja Roindefo sy ny Filoha Zafy Albert. Raha misy anefa ny fiaraha-midinika aminy, dia tokony hazava fa ny ankolafy telo ihany aloha no tompon’ny teny farany amin’izany. Tsy midika ho fandavana izay soson-kevitra mety haroony anefa izany », hoy indray i Emmanuel Rakotovahiny.
Nilaza ho tsy tena mbola nahazo vaovao ampy mikasika ity hevitr’i Monja Roindefo ity ny Pr Ange Andrianarisoa, avy amin’ny ankolafy Ratsiraka, ka tsy manan-kevitra firy aloha.